पेल्ने, ठेल्ने भनियो भने पार्टी धुलोपिठो हुन्छ :: योगेश भट्टराई, सचिव, नेकपा एमाले – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१४ कार्तिक २०७७, शुक्रबार ०८:४० English
पेल्ने, ठेल्ने भनियो भने पार्टी धुलोपिठो हुन्छ :: योगेश भट्टराई, सचिव, नेकपा एमाले
० नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशन भर्खरै सम्पन्न भएको छ। महाधिवेशनपछिको अवस्थालाई तपाइँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ?
– नवौं महाधिवेशन ऐतिहासिकरुपले सम्पन्न भयो। हामीले पार्टीको नवौं महाधिवेशनपछि पार्टीको तर्फबाट एउटा नयाँ विचार ल्याएका छौं। नेपाली समाज बदलिएको छ। त्यो बदलिएको नेपाली समाजअनुरुप हाम्रो कार्यदिशालाई पनि बदल्नुपर्छ भन्ने महाधिवेशनले निर्णय गरेको छ। त्यो भनेको हामीले अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन जितेका छौं र लोकतान्त्रिक आन्दोलनसँगै हामीले उन्नत किसिमको पुँजीवादी राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न गरेका छौं। अब नेपालका राजनीतिक दल अझ कम्युनिष्ट पार्टीको दायित्व आर्थिक–सामाजिक क्रान्तिको दिशामा जाने हो। त्यसका लागि सम्वृद्ध नेपाल निर्माणको योजनासहित अघि बढ्नुपर्छ भनेर एमालेले भनेको छ। त्यो प्राप्तिका लागि पार्टी स्वयमलाई पनि उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ। नेता–कार्यकर्तालाई श्रमसँग जोड्नुपर्छ। यो नीति कार्यान्वयन हुँदा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा नेपाल आर्थिक–सामाजिक क्रान्तिको दिशामा नेपाल अघि बढ्ने छ। गरिबी हटाउने रोजगारी सिर्जना गर्ने, शिक्षा–स्वास्थ्यमा जोड दिने जस्ता कुराहरू पनि त्यहाँ पर्दछन्।
दोस्रो कुरा, एमालेको नवौं महाधिवेशनले अत्यन्त लोकतान्त्रिक विधि र प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन गरेको छ। हामीले सबैको सहमतिमा यो प्रक्रिया अवलम्बन गरेका थियौं। त्यही कारण महाधिवेशनअघि प्रतिस्पर्धा जुन खालको थियो अर्थात् जित्नका लागि सबैले अनेकौं खालका प्रत्यन्त गरे। त्यो आफ्नै पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धा भएकाले अब जित र हारको कित्ता बनाउनु हुँदैन। हामी सबैले जितेका छौं। यो भावनाका साथ एक जुट भएरअघि बढ्नुपर्छ। केपी शर्मा ओली अध्यक्ष बन्नुभएको छ। उहाँ अध्यक्ष बने पनि केन्द्रीय कमिटिमा सन्तुलित संरचना निर्माण भएको छ। यो अवस्थामा हिजोको जस्तो परिस्थिति सिर्जना गर्नुको कुनै औचित्य हुँदैन। अब सबैजना मिलेर जानु भन्ने महाधिवेशनको पनि सन्देश छ। यो सन्देशअनुरुप नै एमाले अघि बढ्छ।
० महाधिवेशनका बेला देखिएको गुट–उपगुटको प्रभाव जिम्मेवारी दिने कुरामा देखिन्छ कि देखिँदैन?
– महाधिवेशनका बेला देखिएका समूहगत मान्यताहरूलाई हामीले भिन्नभिन्न विचार समूह भनेका थियौं। ती विचार समूहमा केन्द्रीय कमिटीलगायत विभिन्न जिम्मेवारीमा रहनुभएका कमरेडहरू पनि अलग–अलगरुपमा देखिनुभयो। त्यो मानसिकता अहिले एमालेभित्र सम्पूर्ण रुपमा समाप्त भयो भनियो भने सही नहुन सक्छ। अहिले पनि त्यसका केही प्रभावहरू देखिएका छन्। तर, ती प्रभावहरू विस्तारै हट्दै गएका छन्। म आशावादी छु। आगामी दिनमा महाधिवेशनताका समूहगत रुपमा देखिएका गुटबन्दीहरू सम्पूर्णरुपमा हट्ने छन् र नेकपा एमाले नयाँ ढंगले पुनर्गठनको क्रममा अघि बढ्ने छ।
० एमालेभित्र स्थायी कमिटी र पोलिट्ब्युरो छनोटमा समस्या देखिएको छ। खास कुरा के–हो?
– हामी प्रतिस्पर्धाबाट आएका हौं। नवौं महाधिवेशनमा दुईजना अध्यक्षको मतअन्तर हेर्ने हो भने अत्यन्त कम रहेको छ। त्यसैले एमालेमा महाधिवेशनका बेलाको शक्ति संरचनालाई हेर्ने हो भने बराबरको अवस्थामा छ। यो बराबर शक्तिलाई एकताबद्ध गरेर अघि बढ्ने हो भने एमालेमा प्रशस्त सम्भावना छ। तर, कसैले पेलेर वा ठेलेर जाने र सबैलाई ठेगान लगाउने अनि पार्टी चलाउने भन्यो भने पार्टी खरानी भएर जाने छ। त्यसका लागि नेकपा एमालेको लक्ष्य र उद्देश्यलाई मुलमन्त्र ठानेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन। हामी क्रमशः एकताबद्ध भएर अघि बढ्छौं।
अहिले केही गृहकार्य नपुगेकाले हामीले केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकबाट स्थायी कमिटी र पोलिट्ब्युराको विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याेउने छौं। बाहिरबाट हेर्दा तत्कालै स्थायी कमिटी र पोलिट्ब्युरो गठन गर्न सकेन। त्यसैले एमाले केन्द्रीय कमिटी असफल भयो भन्ने सन्देश गएको छ। वास्तवमा भन्ने हो भने त्यसो होइन। हामी अहिले नै हतार–हतारमा यो निर्णय गर्ने पक्षमा छैनौं। कारण के–हो भने हामीसँग अहिले पनि नवौं महाधिवेशनका बेला भएका समूहबन्दीको प्रभाव बाँकी नै रहेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले हतार गरेर अथवा उत्तेजनामा आएर निर्णय गर्नु भनेको पार्टीलाई नराम्रो दिशामा लैजानु हो। त्यसमा हामी सजग छौं। हामी पार्टीका वरिष्ठ नेतासँग विभिन्न चरणमा छलफल गरेर सबैसँग समन्वय गरेर, सबैका भावनालाई कदर गर्दै निर्णयमा पुग्छौं।
० पेल्ने, ठेल्ने र सबैलाई ठेगान लगाउने कुराको अन्त्य गर्न तपाइँको चाँही भूमिका कस्तो रहन्छ?
– सबैभन्दा पहिला हिजोको मानसिकताबाट सबै मुक्त हुनुपर्छ। पार्टीमा कहिल्यै पनि स्थायी खालनको समूहबन्दी छैन। पार्टीका शीर्ष नेताकै कुरा गर्नुहुन्छ भने हारेका महाधिवेशनमा उहाँहरू फरक–फरक समूहमा उभिने गर्नुभएको छ। पार्टीमा स्थायी समूहबन्दी भयो भने त्यसले पार्टीलाई हानी गर्छ। यस हिसावले हेर्ने हो भने यो सकारात्मक कुरा हो। एजेन्डाको आधारमा हुने समूहबन्दीले पार्टीलाई कुनै हानी हुँदैन। विचार समूह पनि रचनात्मक खालको हुनुपर्छ। वैचारिक खालको समूहबन्दीले पार्टीलाई बलियो बनाउँछ।
पार्टी अध्यक्षले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पटक–पटक भन्नुभएको छ, ‘म दोस्रो पटक अध्यक्ष बन्नुछैन, म अध्यक्ष बन्नु थियो बने। त्यसैले अर्को पटक अध्यक्ष बन्नु पर्ने मेरो आवश्यकता र चाहना नभएकाले मैले कुनै पनि खालको गुटबन्दी गर्नु छैन।’ उहाँले हामीलाई पनि गुटबन्दी नगर्नु भन्नुभएको छ। त्यो उहाँले मन वा हृदयले नैै बोल्नुभएको हो भन्ने ठानेको छु। यदि उहाँले हृदयले नै बोलेको हो भने त्यो नै नेकपा एमालेको मूल स्प्रीट हुनेछ।
० पार्टीभित्र देखिएको गुटबन्दीलाई अन्त्य गरेर जाने कुरामा अध्यक्षको भूमिका चाँही कस्तो अपेक्षा गर्न सकिन्छ?
– सबैभन्दा पहिला नवौं महाधिवेशन अघिसम्म हामीले उहाँलाई र उहाँले हामीलाई जसरी बुझ्नु भएको थियो। त्यो बुझाइमा परिवर्तन आवश्यक छ। त्यो भनेको एक आपसमा मिलेर र सहकार्य गरेर अघि बढ्ने कुरा हो। यो भयो भने हामी रुपान्तरण हुन्छौं र पार्टी पनि रुपान्तरण हुनेछ।
० अध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा थोरै मतले पराजय हुनुभएका नेता माधवकुमार नेपालको जिम्मेवारी पार्टीमा के हुन्छ?
– उहाँ हाम्रो पार्टीको इतिहास हो। जीवित नेताहरूमध्ये वरिष्ठ नेता पनि हो। ज्यादै कठिन अवस्थामा पनि उहाँले पार्टीलाई नेतृत्व गरेर आउनुभएको छ। पार्टीलाई जनस्तरमा स्थापित गर्न पनि उहाँको ठूलो योगदान रहेको छ। पार्टी र राष्ट्रलाई जोगाउन उहाँले खेलेको भूमिका अमूल्य छ। त्यस हिसावले हेर्ने हो भने केपी शर्मा ओली पनि अभिभावक हो। महाधिवेशनपछि अध्यक्ष केपी ओली, नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमका बीचमा सौहार्दपूर्ण वातावरण बन्दै गएको हामीले महसुश गरेका छौं। यो सकारात्मक कुरा हो। नेपाल स्वयमले महाधिवेशनपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सहयोग गर्न म तयार छु भनेर दिएको अभिव्यक्तिले पनि उहाँ अभिभावक भएको प्रष्ट हुन्छ।
यसरी हेर्दा पार्टीले उहाँलाई सम्मानजनक स्थान दिनुपर्छ। हामीले पार्टी अध्यक्षलाई हामीले नेता नेपाललाई अहिले स्थायी कमिटीमा ल्याउनुपर्छ भनेका छौं। त्योसँगै उहाँलाई संविधान निर्माणको सर्न्दभमा विगतको अनुभवलाई पनि हेरेर महत्वपूर्ण स्थान दिनुपर्छ भनेका छौं। पछिल्लो समयमा अध्यक्ष पनि त्यो कुरामा सकारात्मक देखिनुभएको छ। समग्रमा भन्ने हो भने माधवकुमार नेपाल सम्मानित रुपमा स्थायी कमिटीमा रहेर पार्टीलाई सन्तुलित बनाउन समन्वयकारी भूमिका खेलेर अघि बढ्नु हुनेछ।
० वर्तमान सरकारको कार्यशैलीबारे तपाइँको प्रतिक्रिया के छ?
– सरकार गतिहीन छ। सरकार प्रभावकारी ढंगले चल्न सकेको छैन। एमालेको साझा निष्कर्ष हो यो। तर, अध्यक्षले पटक–पटक बैठकमा हाम्रो ध्यान सत्तातिर होइन संविधानतिर जानुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यसकारण हामी अहिले सरकार बदल्ने कार्यसूचीमा छैनौं। यो सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ। हामी त्यही कार्यसूचीका साथ अघि बढेका छौं। त्यही कारण हामीले नेपाली कांग्रेसको उच्चतहमा कुराकानी गरिरहेका छौं। आउने दिनमा सरकारले जनस्तरमा देखिने गरी परिणममुखी काम गर्नुपर्छ। राजनीतिक, संवैधानिक अंगको नियुक्तिमा पनि सरकार सुस्त देखिएको छ। हामी अहिले निर्धारित मितिमा संविधान जारी गर्नेगरी सबै दलसँग सहकार्य गरेर सरकार अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा छौं। संविधानसभा बाहिर रहेका दललाई पनि संविधान निर्माणमा अपनत्व रहनेगरी ल्याउन सरकार लाग्नुपर्छ। एमाले पनि त्यसप्रति सचेत छ।
१७ भाद्र २०७१, मंगलवार ०७:३१ मा प्रकाशित